Mashruuca Saldhigga Charging AirPower Wuu Fiican Yahay | Waxaan ka socdaa mac
Markii ay Apple ku dhawaaqday in ay kansalineyso saldhigga amarka AirPower xilli dambe, ku dhowaad laba sano ka dib markii ay si rasmi ah u soo bandhigtay, qaar badan ayaa ahaa wararkii xigay ee tilmaamay in runtii mashruucii waa la daahiyay oo taariikh maleh, markii tikniyoolajiyadda loo oggol yahay inay hirgeliso fikradda Apple iyada oo aan la kulmin dhibaatooyin kuleylka ah
Xanta ugu dambeysa ee la xiriirta mashruucan ayaa soo jeedinaysa taas Apple ayaa ugu dambeyntii tirtirtay mashruuca. Macluumaadkan wuxuu ka yimid Jon Prosser, oo ku andacoonaya in noocyada iyo barnaamijyada tijaabada la joojiyay si aan xad lahayn. Ilaha uu ka soo xigtay, ee shirkadda, waxay ku andacoonayaan in mashruuca la joojiyay weligiis.
Dhamaan tijaabooyinka / tijaabinta AirPower ayaa laga saaray jadwalka sanadka 2021.
Ilo wareedyo ayaa shaki gelinaya in waligeed dib loo soo ceshan doono.
Waxay umuuqataa markale, AirPower way dhimatay.
Apple wuxuu ku dhawaaqay 2017 'AirPower Charging Dock', oo ah deked lacag bixinaysa oo u oggolaanaysa in lagu soo oogo dhammaan nidaamka deegaanka ee alaabooyinka moobiilka ee Apple. iyaga oo ku dhejinaya saldhigga lacag bixinta meel kasta. Sawirada Apple soo bandhigtay, ayaa loo ogolaaday inay wada qaadaan ilaa 3 aalad, oo uu ku jiro Apple Watch.
Dib u dhacyo badan kadib, Apple waxay ku dhawaaqday joojinta mashruucan sanadka 2019, iyada oo aan la xaqiijin sababta, laakiin ilo wareedyo qaarkood ayaa sidaas soo jeediyey kama badnayn shuruudaha amniga in Apple ay aasaastay, maxaa yeelay intii lagu jiray hawsha lacag-bixinta, saldhigga lacag-bixinta iyo aaladaha lagu soo oogay labadaba, waxay noqdeen kuwo xad-dhaaf ah.
Sannad kadib, warar xan ah oo laxiriira saldhigan lacag bixinta ayaa bilaabay inay soo muuqdaan, iyagoo tilmaamaya Apple ayaa dib u bilawday mashruucii abuurista noocyo cusub tan iyo markii ay xallisay dhibaatooyinka kuleylka ee ku jira processor A11 ee maaraynta tamarta.
Nidaamka lacag-bixinta MagSafe waxay u badan tahay lBeddelka Apple ee saldhigga saldhigga AirPower. MagSafe wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si bilaash ah uga qaadatid iPhone-ka awood 15W waxayna sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku dhejiso kiisaska, boorsooyinka iyo qalabyada kale ee imaan doona suuqa bilaha soo socda ee dhabarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Mashruuca Saldhigga Charging AirPower wuu socdaa si wanaagsan
IMac oo leh processor-ka Apple Silicon ee sannadka 2021